Moske Putra, Masjid Putra, Moske Putra - Putrajaya
Asia Malezia Putrajaya
Adiresy: Prezida 1, Faritra Federaly ao Putrajaya
Tel: +60 3-8888 5678
Toe-karena ara-tsindrimandry: Islamika, maoderina, persiana
Haavo: 116 m
Kapatara: olona 15 arivo.
Fanomezana: maitso maitso
Ny fandravahana ankapoben'ny Putrajaya any Malezia dia ny moske Putra maoderina. Izy dia hanaitra ny fahaiza-manaony sy ny fahalehibeazany na dia ireo mpankafy ara-panatanjahantena aza.
Ny fanorenana ny moske Putra dia nanomboka tamin'ny 1997 ary naharitra 2 taona. Ny lehiben'ny ariary dia talen'ny orinasam-panorenana Kumpulan Senireka Sdn Bhd - Nike Mohammed bin Nyk Mahmud, izay nandray anjara tamin'ny famolavolana an'i Putrajaya ihany koa.
Ankoatra ny moske dia Perdana Putra - sehatry ny Praiminisitra Maleziana. Ny roa amin'ireo trano ireo dia maneho ny fahefana manontolo sy ny fivavahana avy amin'ny governemanta federaly Maleziana.
Mosquée Putra dia miorina amin'ny fomba tandrefana miaraka amin'ny fomba nentim-paharazana Maleziana. Ho toy ny arakaraky ny minaret miisa 116 metatra, ny Moske King Hassan ao Casablanca sy ny moskea Sheikh Omar ao Baghdad dia nalaina. Io minaret avo dimy minitra io dia manasongadina ireo tsangambato dimy amin'ny finoana silamo.
Ny tranobe dia vita amin'ny granatin'ny mozika, nentina avy any atsimon'i Italia. Mahaliana ny mpitsidika ny aloky ny ala-manga amin'ny varavarankely sy varavarana ary varavarankely. Nahoana no nofidina io loko io? Amin'ny finoana silamo dia mariky ny fitiavana sy ny tsara.
Ny moske dia misy fizarana 3: efitrano fanaovana vavaka, tokotany, na Sakhna, ary efitrano maro ho an'ny fivoriana sy fampianarana. Ny tendrony avo indrindra eo ambanin'ny haavony dia mahatratra haavo 76 m eo ambonin'ny tany, ary ny andohalambony dia manohana seza 12. Ny trano fandraisam-paritry ny efitrano dia miloko marevaka amin'ny arisin-tsofina, fitaratra, arse maro sy shabestans (ity no toerana hanaovana vavaka amin'ny alina). $ 18 tapitrisa no lany tamin'ny fanorenana.
Inona no mahaliana?
Ao Malezia, izay ahitana ny antsasaky ny mponina no milaza ny finoana silamo, ny moske dia tsy tokony ho tsara tarehy, fa mbola kanto sy mahafinaritra. Ny tena mahaliana sy mahavariana momba ny moske Putra:
Ny haavon'ilay efi-tranon'ny vavaka dia manana 36 metatra;
miaraka amina taratasy avy ao amin'ny CORAN ny toerana misy ny mpitoriteny ary mihrab dia voaravaka;
ny trano dia mahazaka olona miisa 10 arivo (olona 8.000 ao amin'ny efitrano iray ary vehivavy roa arivo - amin'ny iray kosa), ary ny tokotany - 5000 fanampiny;
Ao amin'ny moske tsy mivavaka fotsiny ihany, fa mitazona seminera, symposia, fihaonambe;
Ny endriky ny feo dia manana endrika mahaliana: ireo mpandahateny dia ampiasaina hanamafisana ny feo avy amin'ny imam;
eo amin'ny kianja lehibe eo anoloan'ny moske dia napetraka ny sainam-pirenena misy sainan'ny fanjakana Maleziana;
Ny fidirana dia miorina araka ny karazana vavahadim-bahoaka ao amin'ny Persilan'ny Muslim.
Alohan'ny hidirana ao amin'ny trano masin'ny silamo dia ilaina ny mandalina ny fitsipika manokana momba ny fitsidihana:
Afaka mitsidika malalaka ny moske ianao, raha tsy mifanohitra amin'ny vavaka ny fitsidihanao. Ireo mpizahatany ao am-baravarana dia nomena akanjo manga manokana, raha tsy mifanaraka amin'ny fepetra silamo ny akanjo. Ilaina ihany koa ny manaisotra ny kiraro eo anoloan'ny tokotany ary mandeha tsy manao kapa.
Ny sigara dia voarara ao amin'ny faritry ny moske.
Ho an'ireo izay maniry ny hitsidika ny moske ho an'ny tenany manokana, tsy misy fitsangatsanganana , dia ho afaka ny fitsidihana (na dia misy aza ny fanomezam-boninahitra, toy ny any amin'ny tempoly rehetra).
Azonao atao ihany koa ny mividy fitsidihana an-dalamby manerana an'i Putrajaya ary mitsidika ny moskea amin'ireo mpizahatany hafa ao an- tanàna: andro mazava (manodidina ny 3.5 ora, no atao ny 10:00 hatramin'ny 18:00) ary hariva (4 ora, hatramin'ny 18:00 ka hatramin'ny 23:00 : 00). Ny saran'ny fitsangatsanganana dia tsy miova arakaraky ny vanim-potoanan'ny fitsidihana:
1 olona. - $ 100;
2 olona- $ 130;
3 olona- $ 150;
4 olona- $ 170;
5 olona- $ 190;
6 olona- $ 200;
7 sy mihoatra noho ny $ 30 amin'ny iray.
Ahoana no ahatongavana any?
Misy safidy maromaro afaka mankany amin'ny moske Putra. Ny ankamaroan'izy ireo dia manaiky
fampiasan'ny fitateram - bahoaka :
Busmay Cityline n ° 868 - mandefa 20 minitra, ny vidin'ny dia dia 3.80 ringgit ($ 0.94);
fiaran-dalamby avy any amin'ny seranam-piaramanidina ao Kuala Lumpur mankany amin'ny seranam-piaramanidina KLIA (peak ora isaky ny 30 minitra, enta-mavesatra isan'ora). Ny vidin'ny dia dia 19 ringgit ($ 4,45);
Manofa fiarakaretsaka na fiara mandritra ny andro ny safidy tsara indrindra sy tsara indrindra.
National Museum (lehilahy)
Water Palace Ujung
Ny fiarovana ny Namhansanson
Sultan Suryansiyah Mosque
Home Rose - ravina mavo sy ravina
Ny afovoan-dalavaly kely - ahoana ny fomba famolavolana tsara ny faritra ao an-trano?
Inona no mifanitsy amin'ny loko maitso?
Ahiana ny mpankafy i Aaron Taylor-Johnson miaraka amin'ny fiarahabana tsy mahazatra ny vadiny
Ahoana ny fampifandraisana ny solosaina amin'ny wifi?
Salmon miaraka amin'ny tsaramaso
Fivavahana Orthodox ny Trinite Masina (Riga)
Volkano ao anaty saosy sotro sy tantely - ao amin'ny fantsom-bokatra 7 ho an'ny sakafo matsiro
Kicking feet amin'ny simulator - teknika amin'ny fanatanterahana
Vin Diesel sy Charlize Theron dia nitendry ny mpankafy azy ireo tao amin'ny Internet
Mink coat cap
Garden Camellia - fambolena sy fiahiana
Sakam-boankazo vita amin'ny mofo matavy
Nahoana ny rano no mihetsiketsika haingana ao amin'ny aquarium?
20+ amin'ireo fanandramana mahavariana nataon'ireo Japone
Banana mamy ho an'ny mofomamy
Banana - toetra mahasoa
Diapers ho an'ny alika
Sakafo avy amin'ny Dr. Gavrilov